Amaphoyisa asabisa ngokubopha abalandeli bakaZuma abephula imithetho yomvalelo | Scrolla Izindaba
Amaphoyisa asabisa ngokubopha abalandeli bakaZuma abephula imithetho yomvalelo
Ngemuva kokwehluleka ukugwema ukuhlangana kwabantu abangaphezu kwenkulungwane ngaphandle kweNkantolo eNkulu yase-Bloemfontein ngoLwesihlanu, amaphoyisa athi ngeke awubekezelele umhlangano ofanayo uma uJacob Zuma esevela eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu kusasa.
Imibuthano emikhulu yabantu abangaphezu kwamakhulu engaphandle, inamathuba amaningi okuba yisizinda sokusabalala kwe-Covid-19 futhi umthetho okhishwe ngaphansi kwemithetho emithathu yomvalelo wezinga lesithathu.
Abalandeli abangamakhulu bakaZuma okubalwa namalungu oMkhonto Wesizwe Military Veterans kulindeleke ukuthi bameseke ngaphandle kwenkantolo.
UZuma kanye nenkampani yase-France yokukhiqiza izikhali i-Thales, phambilini okwakuyi-Thomson-CSF, bathinteka emacaleni okukhwabanisa, ukushushumbisa imali, esuselwa kwizigidigidi ezingama-R60 zokudayisa ngezikhali ngasekupheleni kweminyaka yango-1990.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natali uBrigadier Jay Naicker uthe, labo abazophula imithetho yomvalelo bazoboshwa.
“Kungumqondo ophusile ukuthi abantu kumele bahloniphe imigomo yomvalelo bese behlala emakhaya.
“Akekho umuntu ozobekezelelwa uma ephula imigomo yomvalelo eMgungundlovu,” kusho uNaicker etshela abakwa-Scrolla.Africa.
UZuma usasebenzisa ukwesekwa okukhulu esifundazweni sangakubo kanti abantu abaningi bekulindeleke ukuthi bameseke ngaphandle kwenkantolo ngaphambi kwesitatimende sikaNaicker.
“Amaphoyisa ethu azobe ekulungele ukubhekana nanoma yikuphi ukweqiwa kwemithetho ngaphandle kwenkantolo,” kusho uNaicker.
Othembekile kuZuma nosomabhizinisi uMnuz Nkosentsha Shezi uthe, bazobe besenkantolo ukuzokweseka uZuma ngoLwesibili.
“Noma yikuphi lapho uZuma eya khona sizohamba naye, sizomeseka kuze kube yizinsuku zokugcina ngoba sikholwa ukuthi umsulwa.
“Sizoyihlonipha imithethonqubo kodwa asinamandla okukala abantu abakhetha ukuya enkantolo,” kusho uShezi.
Okhulumela i-ANC, uPule Mabe uthe, amalungu e-ANC kumele ahloniphe imigomo ebekiwe.
“Imithetho yomvalelo icacile, futhi uma uyiphula uzoboshwa kungakhathaleki ukuthi ungubani.”